Kuuriyada Waqooyi oo lagu eedeeyay inay isku dayday inay xaddo xogta tallaalka Covid-19 |
Kuuriyada Waqooyi oo lagu eedeeyay inay isku dayday inay xaddo xogta tallaalka Covid-19
Sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa Kuuriyada Waqooyi ku eedeeyay inay isku dayayeen inay xadaan xogta tiknolojiyadeed ee tallaalka Corona ee ay sameysay shirkadda dawooyinka sameysa ee Pfizer ee Mareykanka.
Wakaaladda wararka ee Yonhap ee dalkaas ayaa kusoo warrantay in saraakiil katirsan sirdoonka Seoul ay gollaha sharci-dejinta ee dalkaas u sheegeen in isku dayga ay sameysay dowladda Kuuriyada Waqooyi, si ay ula soo baxdo xogta la xiriira tallaalka Corona ee ay sameysya shirkadaas oo haatan ay iibsanayaan dalal badan oo caalamka.
BBC-da aya isku dayday in arrintan ay wax ka weydiiso shirkadda dawooyinka sameysa ee Pfizer balse ilaa iyo hadda kama aanay soo jawaabin.
Sidoo kale dowladda Kuuriyada Waqooyi oo lagu eedeeyay tallaabadan ilaa iyo hadda ma aanay helin wax tallaalka feyraska corona balse waxaa la sheegay in toddobaadyada soo socda ay dowladda dalkaas rajeeneyso inay hesho tallaalka AstraZeneca oo gaaraya laba milyan.
Pyongyang ayaa xuduudeeda xirtay sanadkii lasoo dhaafay kadib markii kiisaskii ugu horreeyay lagu arkay dalka Shiinaha oo ay deris yihiin.
Bishii Noofemabr ee sanadkii hore, shirkadda tiknolojiyadda ee Microsoft ayaa sheegtay in sagaal hey’adood oo qaabilsan dhanka caafimmaadka oo ay kamid tahay Pfizer ay bartilmaameedsadeen kooxa ay gadaal ka riixayaan dalalka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Weeraradaas ayay sheegeen inay ka dambeeyeen kooxaha Zinc iyo Cerium ee dalka Kuuriyada Waqooyi iyo koox la sheegay inay kasoo jeedo dalka Ruushka oo lagu magacaabo Fancy Bear, kuwaas oo ku xeeldheer dhaca intarnetka.
Aqalka looga arrimiyo dalka Ruushka ee Kremlin ayaa beeniyay inay bartilmaameedsadeen xogta ama barista tallaakka feyraska corona. Isku dayo badan oo la doonayay in lagu bartilmaameedsado ayaa la sheegay inay guul-dareysteen, waxaana shirkadda Microsoft ay sheegtay in qaar kamid ah isku dayadaas ay kooxahaas ku guuleysteen.
Dowladda Kim Jong Un uu hogaamiyo ayaa la sheegaa in marwalba ay ku hawlan tahay sidii au ugu dhici lahaayeen xogta dalal ama shirkado kale, waxaana dalkan oo dunida inteeda kale ka go’an la sheegay in uu yahay dal ku horumarsan arrimahaas.
Dalkan ayaa la sheegay in muddo ahba uu rajeynayay in uu bartilmaameedsado dalal kale oo uusan bartilmaameedsanin xogta oo keliya balse mararka qaar xita hanti.
Sanadkii lasoo dhaafay, dowladda Ingiriiska ayaa xoogga saartay sidii loo adkeyn lahaa xogta la xiriirta tallaalka.
Xilligan oo adduunka uu aad ugu baahan yahay tallaalka feyraska, waxaa la aaminsan yahay in kooxaha u dhaca xogta ay xoogga saari doonaan sidii ay u heli lahaayeen xogta tallaalka, maadaama dalal kooban ay awood u yeesheen inay soo saaraan tallaal.